Home Wararka Xassan Shiikh iyo Shiikh Shariif oo u duulay Baladwayne ka dib Xayiraadii!
Xassan Shiikh iyo Shiikh Shariif oo u duulay Baladwayne ka dib Xayiraadii!
Labada Mas’uul iyo Xubno la socda oo katirsan Madasha Xisbiyada aran ayaa dhowr saacadood waxaa ay ku xayirnaayeen Garoonka Aadan-Cadde kadib markii loo diiday inay ka dhoofaan Garoonka.
Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo kamid ah Xiuldhibaannada Golaha Shacbaka kana tirsan Xisbiga Midowga iyo horumarka ee UBP oo uu hoggaamiyo Xasan Sheekh ayaa sheegay in sababta loogu diiday inay tahay safarka Ra’iisul Wasaare Kheyre ee Beledweyne, si aanay Madasha Xisbiyada Qaran uga hormarin Beledweyne.
Xaalada Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde ee Muqdisho ayaa haatan si caadi ah kusoo laabatay,kadib markii muddo saacado ah laga dareemay joojinta safarka Baladweyne ee Madaxda Madasha Xisbiyada Qaran